नेपाल आज | २०७७ श्रावण १७ गतेको राशीफल
२०७७ श्रावण १७ गतेको राशीफल
शनिबार, १७ साउन २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
भाग्य मेरो पक्षमा छ ? , के उसले मलाई कल गर्ने छ ? , के म सफल हुनेछु ? हामीले कम्तीमा एकपटक आज के हुन्छ भनेर जान्न खोज्छौँ । राशी क्यालेन्डरको १२ चिन्हमा, मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ र मीनको विशिष्ट प्रतिभा हुन्छ जसले व्यक्तिलाई परिभाषित गर्दछ । के तपाईं बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईंको लागि दिनको भण्डारमा के छ भनेर जान्न मन हुँदैन ? त्यसोभए ती नतीजाहरू आज तपाईंको पक्षमा हुनेछन् कि भनेर जान्नको लागि पढ्नुहोस् ।
सामान्यः तपाईंले विकासमा अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । तपाइँले ती अवरोधहरुको सामना गरि सफलता पाउन सक्षम हुनुहुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाइँ कामको सम्बन्धमा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ । यात्राको क्रममा केही अप्रिय परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईंले आफ्नो पार्टनरसँग खुशीका क्षणहरू साझेदारी गर्नु आवश्यक छ ।
स्वास्थ्यः तपाईंले आफ्नो आँखाको जाँच गर्नुपर्छ । आँखामा जलन हुने सम्भावना हुनसक्छ ।
सामान्यः दिनले अपेक्षित परिणाम दिन्छ । तपाई ठूलो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने आशाको साथ काम गर्न सक्नुहुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईंले काम गरेको बेलामा तपाईंको प्रतिभा र क्षमता अग्रिम हुनेछ । तपाईको कडा परिश्रमका लागि प्रोत्साहन र भत्ता पाउने सम्भावनाहरू छन् ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईंको आफ्नो पार्टनरसँग राम्रो सम्बन्ध नहुन सक्छ । तपाईंले नरम भएर बोल्नु नै तपाईंको सम्बन्धको लागि राम्रो हुनेछ ।
स्वास्थ्यः तपाईंमा उच्च उर्जा स्तरको कारण स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ ।
सामान्यः आजको दिनले तपाईंको गतिविधिहरूमा ढिलाइ सिर्जना गर्दछ । तपाइँ तपाइँको दृष्टिकोणमा धैर्य हुनुपर्छ र प्रभावी ढंगले योजना बनाउनुपर्छ ।
कार्यक्षेत्रः आजको दिन तपाईले धेरै परिश्रम गर्नु पर्ने देखिन्छ । काममा तपाइँका सहकर्मीहरूसँग केहि मनमुटावहरु हुन सक्छ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईंको पार्टनरसँगको प्रेम कायम गर्न तपाई अझ धैर्य हुनुपर्छ । भावनात्मक हुनुबाट जोगिनुहोस् किनकि यसले सम्बन्ध बिगार्न सक्छ । स्वास्थ्यः तपाईं छालाको एलर्जीको शिकार हुन सक्नुहुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल गर्नुहोस् ।
सामान्यः दिनले शोकग्रस्त परिस्थितिहरू देखाउँदछ जसले तपाईंलाई शून्य महसुस गराउन सक्छ । तपाई भावनात्मक हुनुहुनेछ र सन्तुलन गुमाउनुहुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः कामबाट कसैले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैन । अतिरिक्त कामको दबावले तपाईंलाई दिनको लागि चिन्तित बनाउनेछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाइँलाई तपाइँको पार्टनरसँग कुराकानी गर्न समस्या हुनसक्छ । यसले तपाईंको पार्टनरसँग राम्रो समझदारीको लागि मार्ग दिदैन ।
स्वास्थ्यः स्वास्थ्य राम्रो हुनेछैन । तपाईको ढाडमा दुखाइको सम्भावना हुनसक्छ ।
सामान्यः आजको दिन धेरै अनुकूल दिन हुनेछ । तपाईं आप्mनो काममा सजीलै सफलता पाउनुहुनेछ । तपाईको आत्मविश्वासको स्तर बढ्नेछ ।
कार्यक्षेत्रः काम गर्नु अघि थुप्रै सम्भावनाहरु हुनेछन् । सबैले तपाईको कामको प्रशंसा गर्नेछन् ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईं आफ्नो पार्टनरप्रति तपाईंको मायालु भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जसले गर्दा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ ।
स्वास्थ्यः तपाईं स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ । तैपनि आप्mनो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला ।
सामान्यः दिनले गाह्रो अवस्था सिर्जना गर्दछ जसमा चोरी हुन सक्ने सम्भावनाहरु छन् । तपाईले आफ्नो बहुमूल्य चीजहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईले काममा उतार चढावहरूको सामना गर्नुपर्दछ, त्यसैले तपाईको कामलाई उचित ध्यान दिएर ह्यान्डल गर्नुपर्नेछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईं आफ्नो पार्टनरको साथ मन्दिरहरूको भ्रमण गरेर दिनलाई खुशी पार्न सक्नुहुन्छ । यो गरेर, तपाईले ईश्वरीय आशिष्हरू प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
स्वास्थ्यः तपाईं पाचन समस्याहरूको खतरामा हुनुहुनेछ । तपाईंको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु महत्त्वपूर्ण छ ।
सामान्यः आजको दिनले यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्दछ कि तपाईं आप्mनो आशा र विश्वास गुमाउनु हुनेछ । अवरोधहरू हटाउन र राम्रो परिणामहरू हेर्नको लागि आशावादी हुनु महत्त्वपूर्ण छ ।
कार्यक्षेत्रः कार्यले अत्यन्त सफल नतिजा दिनेछ । तपाईंको वरिष्ठको उच्च प्रशंसा मिल्नेछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग रमाइलो क्षणहरू साझेदारी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ ।
स्वास्थ्यः तपार्ई स्थिर स्वास्थ्यको आनन्द लिनुहुनेछ । तपाईको आत्मविश्वासले तपाईंलाई राम्रो स्वास्थ्यको मजा लिन सक्षम गर्दछ ।
सामान्यः तपाईंले प्रगतिको मार्गमा अवरोधहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तपाईं दृढ संकल्प र इच्छासँग अगाडि बढ्नु पर्छ । समझदारीपूर्वक काम गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
कार्यक्षेत्रः काम गर्ने क्रममा तपाईं सतर्क हुनु आवश्यक छ । कार्यको दबाबको कारण त्रुटिहरू हुने सम्भावना छ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईंको पार्टनरसँग कुराकानी गर्दा तपाईं नम्र हुनुपर्छ । बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न र सद्भाव कायम राख्न, तपाईं लचिलो दृष्टिकोण र शिष्ट व्यवहार अपनाउनु पर्छ ।
स्वास्थ्यः ढाड दुख्ने सम्भावना छ । ध्यान गर्नाले केही फाइदा हुन सक्छ ।
सामान्यः यो एक समृद्ध दिन हुनेछ । तपाईं सापेक्षिक सहजताका साथ गाह्रो लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । तपाईंको लचिलो दृष्टिकोणले तपाईंलाई अझ राम्रो परिणामहरू हेर्न सक्षम गर्दछ ।
कार्यक्षेत्रः काम गर्दा राम्रो नतिजा आउन सक्छ । तपाईं आफ्नो वरिष्ठबाट राम्रो नाम कमाउनुहुनेछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाई आफ्नो पार्टनरसँग बहस गर्न सक्नुहुनेछ । यस्तो व्यवहारबाट अलग रहनु र शान्ति कायम गर्नु बुद्धिमानी हो ।
स्वास्थ्यः तपाईंको स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ ।
सामान्यः आजको दिन एक अत्यन्त राम्रो दिन हुनेछ । काममा राम्रो नतिजा ल्याउन सकिने सम्भावना छ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईले काम गर्दा त्रुटिहरू हुने संभावना छ । तपाईंले आप्mनो कामको योजना बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । यसले तपाईंको पार्टनरलाई अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्दछ ।
स्वास्थ्यः तपाईलाई खोकीको कारणले एलर्जी हुनसक्छ ।
सामान्यः तपाइँले आजको दिन ठूला निर्णयहरु लिनबाट जोगिनु पर्छ । काममा बढि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईंले काम गर्दा सहकर्मीहरुको साथ पाउन सक्ने सम्भावना छ । सहकर्मीहरुस
प्रेम र सम्बन्धः तपाईं आफ्नो पार्टनरप्रति इमानदार हुनुहुनेछ । तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग छलफल गरिे घरमा महत्त्वपूर्ण कामगर्ने योजना बनाउनुहुनेछ ।स्वास्थ्यः स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु भयो भने तपाईंको स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ ।
सामान्यः इच्छित परिणामको आनन्द लिनको लागि आजको दिन एक अत्यधिक अनुकूल दिन हुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाई आफ्नो काम सजिलै पूरा गर्र्न सक्षम हुनुहुनेछ र काममा सफल हुुनुहुनेछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईं आफ्नो पार्टनरलाई धेरै माया गर्नुहुनेछ । तपाईं आफ्नो साथीलाई मायालु भावनाहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
स्वास्थ्यः तपाइँको स्वास्थ्य ठिक नहुन सक्छ । स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु जरुरी छ ।